China hombe compost muchina wechipfuwo mombe mupfudze hwindi hweruzha
M6300 ndiyo yakanyanya kuzvisundira kompositi yekugadzira muchina kuChina, ine hupamhi hwekushanda iri 6.5m, uye kureba kwekushanda kuri 2.5m. Iyo inogona otomatiki kupedzisa kutendeuka, kumutsa, kusanganisa, kupwanya uye oxygenate iyo composting zvinhu, uye iyo spray system inogona kuwedzera mvura uye kuvirisa kune iyo composting zvinhu. M6300 inogona kubatsira kusimudzira michina yekuumba manyowa kuti iwane izere uye inokurumidza kuvirisa uye ive fetereza inovaka.
Kushanda Unyanzvi: 3780m³ / h
Kutora mukana wakanaka wemanyowa emhuka aya uye nekuita kuti uve anobatsira Organic fetiraiza ne TAGRM’s compost Turner.
1. Natsiridza iyo organic inove kusvika kunosvika 50%. Kazhinji mupfudze wezvipfuyo unofanira kuwedzera imwe tsvina yemasipareta neuswa hwekurima, huni yehuni inofanirwa kuwedzera imwe matunhu emunharaunda.
2. Gadzira murwi wemudziyo usina kugadzirwa unokwanisa kukodzera kumushini wekushandura wo basa mukati.
3. Tendeuka, sanganisa, pwanya uye isa oxygen mumurwi we composting nguva dzose, imwe mvura kana kuvirisa zvingangodikanwa.
4. Tarisa uone kuvirisa uye mhedzisiro. Kana munhuwi we compost wakanaka, ruvara rwe compost padhuze neruvara rwe brown, iyo compost inova yakasununguka, iyo C / N <0.6, tembiricha yakagadzikana uye yakafanana netembiricha yemamiriro ekunze, iko kuvirisa kuri kubudirira.
Muenzaniso M6300 Ground clearance 100mm H2
Rate Simba 250KW, 340PS, Kumanikidzwa kwepasi 0.82Kg / cm²
Rate kumhanya 1800-2500 r / min Kushanda upamhi 6300 ~ 6500mm Max.
Mafuta anoshandiswa 35 235g / KW · h Kushanda kukwirira 2500mm Max.
chinzvimbo chemafuta 320L Mberi kumhanya L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Chinokambaira chinotsika 6885mm W2 Kumhanya kumashure L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Kukura kwekukura 2250 × 400mm Simbi neshangu Fudza chiteshi upamhi 6885
Kukura 7535 × 2895 × 3100 mm W3 × L1 × H1 Kutendeuka nharaunda 3900mm min
Kurema 11000kg Pasina mafuta Dhiraivha modhi Hydraulic kuzvidzora
Dhayamita ye roller 979mm Nebanga Kushanda chinzvimbo 3780m³ / h Max.
Iyo M6300 compost Turner inozoiswa mune makumi mana HQ. Chikamu chikuru chemuchina we compost uchazara munzvimbo dzakashama, zvimwe zvikamu zvichazara mubhokisi kana kuchengetedza kwepurasitiki. Kana iwe uine chero zvakakosha zvinodiwa pakurongedza, isu tinorongedza sekukumbira kwako.
Pashure: Wenyika inozivikanwa compost Window Turner yemombe mupfudze
Zvadaro: CE hosi mupfudze wewindow Turner inozvifambisa yega vharuvhu